Muqdisho:- Wariyayaal Diiday inuu Eey Baaro+Dhageyso. – SBC
Muqdisho:- Wariyayaal Diiday inuu Eey Baaro+Dhageyso.
Posted by SBC Editor on May 10, 2015 Comments
Wariyayaal badan ayaa ka carooday, maanta markii lagu qasbay inuu baaro Eey mar loogu yeeray in ay war ka duubaan Kulan ka dhacayay meel u dhaw Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, oo ay AMISOM qeyb ka ahayd.
Wariyayaasha ayaa iska diiday inay qaataan in uu baaro Eey, waxaana sidaasi awgeed ay isaga tageen halkii ay u shaqo tageen ee Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho, Sida SBC Xafiiskedda Muqdisho Ay U sheegeen qaarkamid Saxafiyiintaasi.
Ciidamada AMISOM oo ilaalinta amaaanka qaabilsanaa ayaa isku dayay in ay saxafiyiinta dooneysa in ay halkaas galaan goobtaas ku baaraan. iyaga iyo qalabkoodaba Eey, sida ay sheegeen wariyayaashu dhareeraya, korkiisuna qoyan yahay.
Ma ahan Wax Cusub in Wariyayaasha ay isaga soo laabtaan Shir ka dhacaya Xarunta AMISOM ee Xalane, iyaga oo diidaya in uu baaro Eey,
Dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo dhowr jeer laga codsaday inay wax ka qabtaan arrintaasi ayaan ilaa hadda wax ka qaban oo xitaa aan ka hadlin.